Amazon crypto raki-daza ho an'ny angon-drakitra mifandraika patanty mikoriana - Blockchain News
Amazon dia nahazo ny patanty ho an'ny angon-drakitra mivantana tsena, izay mety hamela ny mpanjifa handray tena andro cryptocurrency barotra tahirin-kevitra.
Amazon ny patanty mamaritra ny rafitra izay mikoriana angon-drakitra olona mety tsy ho toy izany ihany sarobidy eo amin'ny, Bitcoin mampiasa tahirin-kevitra sy ny raharaham-barotra cryptocurrency ho ohatra. Kanefa amin'ny fanakambanana izany amin'ny angon-drakitra vaovao avy amin'ny loharanom-baovao fanampiny, “ny tahirin-kevitra dia mety ho lasa renirano sarobidy kokoa.”
Hoy ny patanty: “Ohatra, vondrona elektronika na mpaninjara aterineto izay manaiky Bitcoin varotra dia mety manana adiresy izay mety sambo fiara-miasa amin'ny Bitcoin adiresy. Ny elektronika mpaninjara afaka manambatra ny sambo adiresy miaraka amin'ny Bitcoin barotra tahirin-kevitra mba hamoronana tahirin-kevitra sy republish correlated ny mitambatra tahirin-kevitra toy ny angon-drakitra mitambatra renirano.”
Previous Post:Insurance broker Marsh miasa miaraka IBM amin'ny sehatra Blockchain
Next Post:Koreana crypto fifanakalozana manomboka lalàna tena ezaka
furtlino hoy i:
Mey 15, 2018 amin'ny 12:18 PM